PressReader - Isolezwe: 2018-06-14 - Babhiyozele isinqumo se-United Nations
Babhiyozele isinqumo se-United Nations
Isolezwe - 2018-06-14 - IZINDABA - KWANDA NJOLI
BAGUBHE iminyaka emihlanu kwanqunywa ukuthi bangabantu abakhubazekile abanebala elimhlophe izolo eThekwini.
Kulo mgubho oqale ngemashi ebisezitaladini zakuleli dolobha, abebala elimhlophe bebezwakalisa ukujabula kwabo ngemuva kokuthi kwanqunywa ukuthi bangabantu abakhubazekile yi-United Nations ngoJuni 13, 2013. Ngaphandle kokugubha le minyaka emihlanu, abanebala elimhlophe, bebeqwashisa abantu ngesimo sabo bebanxusa ukuthi bangababulali ngoba nabo bangabantu.
Ngesikhathi bemasha bebephethe izingqwembe ezinemibhalo ethi, “Asizona izishawa, Asiwenzi umuthi thina, Yekani ukusidlwengula!”
Le mashi isuke emgwaqweni uBotha yaya eCity Hall.
Okhulumela inhlangano, i-Albinism Society KwaZuluNatal, uMnuz Maxwell Thabethe, ududuze imindeni yabanebala elimhlophe ababulawa ngoba kufunwa izitho zabo zomzimba ukuze kwenziwe umuthi. Uthe lolu suku lukhulu kubo ngoba bese kunesikhathi eside bengathathwa njengabantu abakhubazekile. “NgoOkthoba 2012, samasha eThekwini simashela amalungelo ethu ukuthi nathi sithathwe njengabantu abakhubazekile ngoba izingane ezinebala elimhlophe ziyashiya esikoleni ngenxa yokungalutholi usizo lwezincwadi ezibhalwe ngokuhlukile kunezezingane ezingenakho ukukhubazeka. Sasifuna nohulumeni ukuthi asinike imali yesibonelelo sikahulumeni ngoba kwakuthiwa siyavilapha, asiye kosebenza. Namuhla siyajabula ukuthi sesithathwa njengabo bonke abantu.”
Obemele iMeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede obengekho, uNksz Nompumelelo Ntshangase, uthe bagubha nabanebala elimhlophe ngoba bayahambisana nesinqumo
se-UN sokuthi bathathwe njengabakhubazekile.
“IMeya, uNkk Zandile Gumede, ubezojabula ukuba khona kuwusuku olukhulu njengalolu. Njengesithembiso sakhe, uthe uzoyisa izingane ezinebala elimhlophe eShaka Marine World ngoSepthemba kulo nyaka.” kusho uNksz Ntshangase.
UNkk Thembisile Madlala (43), iPhini likaSihlalo we-Albinism Society KwaZulu-Natal, uthe wakhula ecwaswa kubo.
“Ekhaya kwakuthi uma kuphakwa okwami ukudla kubekwe nezinja. Ngaqala ukuzibuka esibukweni ngo 1996 ngoba ngangizinyeza ngesiqu sami. Ngabona ukuthi angingene kwinhlangano efana ne-Albinism Society ngoba ngifuna ukusiza abanye,’’ kusho uNkk Madlala.
UNkk Andresina Kubheka (73), uthe ziningi izingqinamba abebhekene nazo kodwa wakwazi ukudlula kuzona ngoba umndeni wakhe ubumeseka. “Ezinye kwakuwukukhonjwa yizingane, zingidabukela. Ngiyajabula njengoba nathi sesikwazi ukuthi siphathwe njengabo bonke abantu.”
Izithombe: BONGANI MBATHA / AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
USPHESIHLE Mageza ngesikhathi abanebala elimhlophe begubha iminyaka emihlanu i-United Nations yanquma ukuthi bangabantu abakhubazekile
ABANTU abaphila nebala elimhlophe ngesikhathi behlangene eCity Hall eThekwini